Bug ivumela ukufikelela kwiifoto kwi-iPhone nokuba itshixiwe | IPhone iindaba
Bug ivumela ukufikelela kwiifoto kwi-iPhone nokuba itshixiwe
Kubonakala ngathi abasebenzisi abachitha ixesha elininzi befuna iindlela zokudlula ikhowudi yokutshixa ye-iPhone abaze baphumle. Indlela entsha ifunyenwe kutshanje ethatha ithuba bug okanye ukhuseleko oluza kuvumela umsebenzisi ongagunyaziswanga fikelela kwiifoto kunye nemiyalezo kwi-iPhone nokuba ikhuselwe ngegama eligqithisiweyo okanye iTouch ID.
I-bug ekhankanyiweyo ifunyenwe yi-EveryThingApplePro kunye ne-iDeviceHelp kunye inokuchaphazela nayiphi na i-iPhone ene-iOS 8 okanye kamva efakiweyo. Imfihlo yale ndlela kukuba, ngokungathi kunjalo, iqhinga okanye inyanda yeSiri ekusinikeze ukufikelela kulo mxholo, ke sele ndilindele ukuba isisombululo sethutyana sinokuba yintoni ukukhusela nawuphi na umsebenzisi ongagunyaziswanga ekuboneni iifoto okanye imiyalezo yethu.
1 I-bug entsha ivumela ukudlula ikhowudi yokutshixa ye-iPhone
2 Indlela yokuzikhusela kolu lwaphulo-mthetho
I-bug entsha ivumela ukudlula ikhowudi yokutshixa ye-iPhone
Okokuqala, kufuneka icaciswe ukuba ukuphindaphinda oku kusilela, umsebenzisi ongagunyaziswanga kufuneka abenayo ukufikelela ngokomzimba kwi-iPhone kunye nokwazi inombolo yefowuni yexhoba. Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukufikelela kwiifoto kunye nemiyalezo ye-iPhone ngaphandle kokufaka iphasiwedi iya kuba zezi zilandelayo:
Senza umnxeba okanye iFaceTime kwi-iPhone esifuna ukuhlasela.
Cofa kwi icon yomyalezo kwiscreen somnxeba ongenayo.
Sikhetha «Umyalezo wesiqhelo» ukuya kwifestile yokuphendula.
Senza iSiri isebenze kwaye sithi "Sebenzisa i-VoiceOver."
Kwisikrini somyalezo, sicofa kabini kwigama lefowuni kwaye sibambe umnwe kwimpompo yesibini.
Sidlala kwibhodi yezitshixo ngokukhawuleza kangangoko sinako. Kuya kufuneka senze amanyathelo ama-5 kunye nama-6 amaxesha amaninzi ukufikelela kwisiphumo esifunekayo. Ukuba sifuna ukubona imiyalezo, apha kufuneka sikhethe nawuphi na umfownelwa. Ukuba sifuna ukubona iifoto, siyaqhubeka ngenyathelo elilandelayo.
Ngoku sicela uSiri ukuba "acime i-VoiceOver."
Sibuyele kwiMiyalezo kwaye sibhale unobumba wokuqala wegama lomntu owenza umnxeba kwindawo ephezulu.
Sichukumisa i icon yolwazi kufutshane kwaye senza umfowunelwa omtsha.
Sikhetha «Yongeza ifoto». Oku kuya kusenza sizibone zonke iifoto ezikwisixhobo esisezantsi.
Indlela yokuzikhusela kolu lwaphulo-mthetho
Ndiyazi ukuba kunzima kakhulu ukuba bandithathele ingqalelo, kodwa kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ndibhale i-imeyile kuApple ndicebisa ukuba bayiguqule indlela esibiza ngayo uSiri kancinci. Into endibacele yona kukuba, ngayo yonke into yenziwe yasebenza, uSiri uza kusebenza kuphela kwiscreen ukuba umamele Hayi Siri ngelizwi lethu okanye cofa iqhosha lokuqala ngomnwe obhalwe iminwe yeminwe. Ingxaki, yiyo loo nto ndikubhalele, kukuba ukuze umsebenzi we "Hey Siri" usebenze kwaye usebenze, kufuneka sibe nokufikelela kuSiri kusebenze kwiscreen sokutshixa; ukuba le yokugqibela siyisebenzisile, nawuphi na umnwe unokucela uSiri.
Logama nje iApple ingenzi into efanayo nale ndiyicelileyo, ifayile ye Isisombululo kukuya kuseto / kwi-ID yokuChukumisa kunye nekhowudi, beka iphasiwedi kunye nokucima uSiri kwiscreen sokutshixa. Into emnandi ngayo ukuba siyenza ngoluhlobo, ubuncinci kwi-iPhone 7 yam, kukuba ukubiza uSiri ngomnwe obhalisiweyo kuyasebenza, kodwa into embi kukuba asizokwazi ukusebenzisa u "Heyi, Siri" kwindawo evaliweyo isikrini.
Ibug ikhona kwi-beta yamva nje ye-iOS 10.2, ke asinokwazi ukuba iya kuba njalo naxa kukhutshwa ingxelo yokugqibela. Into elungileyo ukuba iiblogi ezikhethekileyo kufuneka zipapashe i-bug kukuba i-Apple iyakuphela iyazi ngobukho bayo kwaye sonyusa amathuba okuba i-bug ilungiswe kwangoko. Okwangoku, mhlawumbi kungcono ukwenza njengam: i-iPhone yam ichukunyiswe ndim kuphela. Ke akukho msebenzisi ungagunyaziswanga onokufikelela kuyo nayiphi na eyam (okanye aphule i-iPhone yam!). Ngaba ukhathazekile ngale mpazamo intsha yokhuseleko abanokuthi bazibone zonke iifoto zakho ngaphandle kokusebenzisa iphasiwedi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ukhuseleko lwePhone » Bug ivumela ukufikelela kwiifoto kwi-iPhone nokuba itshixiwe
UMarcos Trabanco sitsho
Kukuthini ukubona iifoto endizithathayo ngosuku, kuya kufuneka ukuba ube ne-iPhone ezandleni zomnye umntu ixesha elide, andikhathali nganto (kodwa ukuba bayayilungisa, chapo) !!!
Phendula uMarcos Trabanco
Izaphulelo ziqala: I-iPhone 6s isaphulelo kwi-Fnac's Pre-Black Friday
I-Apple ivumelanisa imbali yakho yokufowuna kwi-iCloud